ကိုဈာန်: ပျံသန်းနိုင်စွမ်းတောင်ပံများနှင့် နှင်းဖြူဇီးကွက်များ
မည်သူဖွင့်လိုက်သည်မသိ၊ အခန်းထဲတွင် “လှောင်ချိုင့်ထဲကတေး” သီချင်းသံ လွင့်ထွက်လာ.၊ ကျွန်တော့် စိတ်အလျဉ်က ရုပ်တရက် တုန့်ကနဲရပ်သွားသလိုလို၊ ထို့နောက် သီချင်းသံကို ကြားတချက် မကြားတချက်၊ ဖတ်လက်စစာအုပ်နှင့် သီချင်းသံကြား အတွေးများ စုန်ချီဆန်ချီကူးလျက်၊ သည်အခြေအနေသည် တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်ဆိုလျင်လည်း အတော်ထူးခြားသည့် တိုက်ဆိုင်မှုဟုသာ ပြောရမည်ဖြစ်သည်ထင်.၊
စာအုပ်က ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုသမျွတ ဂျာမနီနိုင်ငံသံရုံး သတင်းနှင့်ပြန်ကြား ရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေပြီး ဆရာလှသမိန် ပြန်ဆိုသည့် ခေတ်သစ်ဂျာမန်လက်ရွေးစင်စာပေ ဖြစ်သည်၊ စာအုပ် ဘာသာပြန်သူ. အမှာစကားတွင် စာအုပ်.မူလအမည်မှာ PEN ဖြစ်ကြောင်း။ P မှာ Poem ကဗျာ။ E မှာ Essay ဖြစ်၍ N ကား Novel ၀တ္ထုကို ဆိုလိုကြောင်း။ အဆိုပါ စကား ၃ လုံး. အစအက္ခရာများအား ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသော “ကလောင်” ဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း။
မျက်မှောက်ခေတ် ဂျာမန်စာရေးစရာများ. စာပေလက်ရာသစ်များကို ရွေးချယ်တင်ပြထားကြောင်း။ မူရင်းစာရေးသူတို့. ရေးဖွဲ့ပုံ။ ယူဆပုံ။ စိတ်ကူးပုံ။ တင်စားပုံ။ စကားသုံးနှုန်းပုံ။ တွေးခေါ်စဉ်းစားပုံ။ တီထွင်ပုံနှင့် ရေးဖွဲ့ချက် အကြောင်းအရာများကို အရင်းအတိုင်း သုံးသပ်လေ့လာမိစေရန် တတ်နိုင်သမျှ အတိအကျ ပြန်ဆိုထားကြောင်း ဆိုပါသည်၊ စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်လျှင် ဘာသာပြန်ဆိုသူ. စေတနာနှင့် အားထုတ်မှုကို ထင်ထင်လင်းလင်းမြင်ရလိမ့်မည်၊ ကျေးဇူးကြီးလှသည်ဟု အောက်မေ့.၊ စာအုပ်ကို ၀တ္ထုများ။ ကဗျာများ။ ဆောင်းပါများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ဟူ၍အခန်း ၄ ခန်းခွဲ စီစဉ်ထားပြီး နောက်ဆက်တွဲသဘော စာရေးသူတို့.ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ဖေါ်ပြထားသည်မှာလည်း ထူးခြားချက်လို ဖြစ်နေသည်၊
လောလောလတ်လတ် ကျွန်တော်ဖတ်နေသည်က ၁၉၇၂ နှစ်အတွက် စာပေနိုဗယ်လ်ဆုရှင် ဂျာမန်စာရေးဆရာ ဟိန်းနရစ်ဘိုးလ်. သူတို့ပျံမပြေးကြပေ ဆိုသည့် ဆွေးနွေးချက်များအခန်းပါ စာတစ်ပုဒ်၊ ဆွေးနွေးချက်များ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ထည့်ထာှးုသာ ဆွေးနွေးချက် ဖြစ်ရသည် ထင်.၊ တကယ်က ရသစာတမ်းလိုလို။ ဘာလိုလို ကျွန်တော်လည်း မခွဲခြမ်းတတ်၊ စာပေဝေဖန်သူတို့သာ လိမ္မာတတ်ဍ္ဎပွန်ပေလိမ့်မည်ထင်ရ.၊
စာ စလျင်စခြင်း စာရေးသူက ယခုနှစ်တွင် အရေးအပါဆုံးသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးပွဲလမ်းသဘင် ကိစဏဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်းဟု သင်သိလိုပေလိမ့်မည်၊ ဆိုကာ ပွဲလမ်းနှစ်ရပ်ကို အဘယ်ကြောင့် သီးခြားခွဲသင့်ပါသနည်း၊ ဟုမေးလိုက်သည်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးသည် ခွဲခြား၍ ပိုင်းခြား၍ မရနိုင်။ ကြောင်း သူ့အမြင်ကိုတင်ပြလာသည်၊ ထို့နောက် အနုပညာနှင့် လူမှုအသိုက်အ၀န်း(လူ့အဖွဲ့အစည်း) သည်သာ အစဉ်အမြဲပင် တသီးတခြား ဖြစ်ပေသည်၊ ဟု ဆို၍ သူ့အယူအဆကို ၀ံ့ဝံ့စားစား ထုတ်ဖေါ်ချပြလိုက်သည်၊ သဘောတူခြင်းမတူခြင်း လက်ခံခြင်းမခံခြင်းတို့မှာ ဘက်သဘောရပ်တည်ချက် ကိစ္စအဖြစ်နှလုံးပိုက်၍ စာကိုဆက်ဖတ် နေမိသည်၊
သူ့အနေနှင့် ဆိုလျှင် နှစ်ခု. အရေးပါဆုံးသော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်နှင့် အရေးပါဆုံးသော လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုမှာ နှစ်စဉ်လည်ပတ်နေကြအတိုင်း ဒေသတိရိစ္ဆာန်ရုံရှိ ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေ နှင်းဖြူဇီးကွက်ကြီးထံ နှစ်တပတ်လည် လည်ပတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်၊ ဟု ဆိုလိုက်ရာ ကျွန်တော့်စိတ်တွင် အံ့အားသင့်ခြင်းနှင့် နားမလည်နိုင်ခြင်းတို့ ဖြတ်ကနဲလျှပ်ပြေးသွား.၊
ဘယ့်နှယ် ရှေ့မှာတစ်လျှောက်လုံး အရေးပါသည့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ အရေးပါသည့် လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်တို့ စသည့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည့် စကားများပြောလာနေရင်းမှ သူ. အရေးပါသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်မှာကား ငှက်တစ်ကောင်ထံ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပါလိမ့်ဟု သိချင်စိတ်က တဖွါးဖွါးပေါ်လာ.၊
ထို့နောက်ဆက်လက်၍ ထိုဇီးကွက်မကြီး အကြောင်းနှင့် ထိုဇီးကွက်မကြီးထံ သူ အဘယ်
ကြောင့် နှစ်စဉ်သွားရောက်လည်ပတ်ရကြောင်းကို အဘယ်အရာသည်ဇီးကွက်မကြီးထံ (၀ါ) သူ.ရှေ့မှောက်သို့ သွားရောက်ရလေအောင် ဆွဲဆောင်သနည်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် လက်ခံတွေ့ဆုံနိုင်သူ မဟုတ်ပါ၊ ထိုမှတပါး သူ တွေ့ဆုံရသူအတွက် အလွန်စေ့စေ့စပ်စပ် ဆန်းစစ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်၊ ကျွန်ုပ်အား ဆွဲဆောင်သောအရာမှာ သူသည်အလွန်လှပ၍ အလွန်စင်ကြယ်ပြီး။ အလွန်လိမ္မာ၍ အလွန်ရိုင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်၊ ထိုမှတပါး သူသည် အလွန်လည်းရဲရင့်ပေသည်၊ သို့ရာတွင် ယခုအချိန်တွင်ကား သူ.ရဲရင့်မှုကို များစွာအသုံး မချနိုင်သေးပေ၊ သူ. ခံနိုင်ရည်ရှိသောအရာကို တွက်ဆရသလောက်မှာ သူ. လှောင်အိမ် သံတန်းများသာ ဖြစ်ပေသည်၊ ဟု ပြော၍ ထိုဇီးကွက်မကြီး. ပကတိအခြေအနေနှင့်စရိုက်သဘာဝကို ဖေါ်ရွှန်းလိုက်သည်၊ လှပခြင်းနှင့် စင်ကြယ်ခြင်းကို တွဲဖက်ပြု ရဲရင့်ခြင်း လိမ္မာခြင်းတို့ ရှိသည် မှန်သော်လည်း ထိုအရည်အချင်းများ သူအသုံးမချနိုင်သေးကြောင်း။ လောလောဆယ်တွင် သူ့ခံနိုင်ရည်ကို တိုင်းဆရန်မှာ လှောင်အိမ်နှင့် သံတန်းများသာဖြစ်ကြောင်း လှပစွာရေးဖွဲ့ပြ.၊ ကျွန်တော့် စိတ်အထင် ရိုင်းသည်ဆိုသည်မှာလည်း အင်္ဂလိပ်လို Wild ကိုညွှန်းသည်ထင်.၊ သို့ဆိုလျင် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်သော။ အပြုအပြင် မရှိသော။ ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတို့ ကင်းသော အရိုင်းဆန်ခြင်းသာဖြစ်ရမည်၊ မသွေးရသေးသည့် ကျောက်မျက်ကို အရိုင်းတုံးဟု ခေါ်သည့်နှယ် ဖြစ်လေမည်လားဟု တွေးမိသည်၊
စာရေးသူက သူနှင့် ထိုဇီးကွက်ကြီးတို့ မည်သည့် အကြောင်းအရာများ ဆွေးဆွေးနွေးကြသည်ကို စာဖတ်သူ.သိချင်စိတ်ကို အောက်ပါအတိုင်း နိုးဆွပေးပြန်ပါသည်၊ စာရေးဆရာများသည် နှင်းဖြူဇီးကွက်နှင့် အဘယ်အရာကို ဆွေးနွေးသနည်း၊
သူနှင့် နှင်းဖြူဇီးကွက်တို့ ဆွေးနွေးချက်များကို တဆက်တည်းပြောချလိုက်.၊ မကုန်ခန်းနိုင်သော အသွင်အပြင်နှင့် အနှစ်သာရအကြောင်းပင် ဖြစ်ပေသည်၊ ယခုနှစ်တွင်ကား ကျွန်ုပ်တို့. ဆွေးနွေးချက်ခေါင်းစဉ်မှာ လွတ်လပ်ရေး. အသွင်အပြင်နှင့်အနှစ်သာရ အကြောင်းပင် ဖြစ်ပေသည်၊
စာရေးသူက နှင်းဖြူဇီးကွက်မကြီးကို စဆွေးနွေးပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ဆိုသည်၊ “အခြား ရေခဲငှက်နှင့် လင်းတကြီးများကဲ့သို့ အမိုးမဲ့လေဟာပြင်ခြံဝင်း ကာရံပေးထားပါသလား” ဟုမေးသည်၊ ဇီးကွက်မကြီးက “ဟုတ်ကဲ့” ဟုဖြေသည်၊ သို့ရာတွင် သူကငြင်းပယ်ခဲ့သည်၊ လှောင်အိမ်ကိုသာ ပိုသဘောကြသည်၊ ထိုချေအချ စကားပြောခန်းကိုကျွန်တော် နားလည်ချက်မှာ အခြားသောရေခဲငှက်နှင့် လင်းတကြီးများကို အမိုးပါသည့် အကာအရံကြားတွင် ထားသည့်နည်းတူ သူ့အားလည်း ထိုသို့ နေချင်ပါသလား မေးသည့်အခါ။ သူက ထိုသို့ မနေချင်ကြောင်း လှောင်အိမ်ကိုသာ ပိုသဘောကြကြောင်း ပြောပြီး။ အမိုးမဲ့လေဟာပြင်ကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း ပြန်ပြောပြဟန်ဟု သဘောရသည်၊
ထိုရောအခါ စာရေးသူက ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ဟု ညီးတွားမိလိုက်သည်၊ ထို့ပြင်လည်ွးှစင်ကြယ်သော လှပသော။ လိမျွာသော။ ရိုးသော ဇီးကွက်မကြီးနှင့် စကားပြောမိသည့် အခါတိုင်းတွင် သူ့ကိုယ်သူ အလွန်မိုက်မဲလှသည်ဟု ခံစားရမိကြောင်းဆိုပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ ရပ်လိုက်သည်၊
သည်တော့မှ ဇီးကွက်မကြီးက “ရေခဲငှက်နဲ့ လင်းတတွေ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ရှင်သတိမထားမိဘူးလား” ဟု မေးသည်၊ “ထားမိပါတယ်၊ သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ အတောင်ပံကြီးတွေ ကိုဖြန့်ရိုက်ခတ်ပြီး ခန်းနားတဲ့ ဟိတ်ဟန်တွေကို ပြသနေကြတယ်၊” ဟု သူဖြေလိုက်ကြောင်းပြောပြီး ။ ဇီးကွက်မကြီး. အမေးကို ဆက်ရေးသွားပြန်သည်၊ “ရှင် သူတို့ အဝေးကို ပျံသွားတာကိုရော တွေ့ဘူးလား၊” “ဟင့်အင်း၊ ကျုပ် သူတို့ပျံပြေးတာ မမြင်ဖူးဘူး” ဟု ပြန်ဖြေရင်း။ ဘာများ ဆက်ပြောမှာပါလိမ့် ဆိုသည့်အတွေးနှင့် ငြိမ်သက်နေဟန်ရှိ.၊
“ဒီလိုဆိုရင်လည်း ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေမိုက်ကြီးရယ်။ ဘာကြောင့် မမြင်ရတာလဲ၊ သူတို့အတောင်ပံကြီးတွေ ရိုက်ခတ်ပြီး တခမ်းတနား ဟိတ်ဟန်တွေ လှည့်ပြသားဘဲ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ပျံမပြေးနိုင်ကြဘူးရှင့် ၊ သူတို့ အတောင်ပံတွေကို ညှပ်ခံထားရတယ်၊ ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်မ လှောင်အိမ်ထဲမှာ နေချင်တာပေါ့၊ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ လေဟာပြင်ဆိုတာ သံတိုင်သံတန်းတွေတော့ မရှိဘူးပေါ့၊ ဒါပေမယ်လို့ အတောင်တွေ ညှပ်ခံထားရတယ်လေ၊ လှောင်အိမ်ဆိုတာမျိုးက သံတိုင်သံတန်းတွေတော့ရှိတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် အတောင်ပံအညှပ်မခံရဘူးမို့လား၊”
စာရေးသူက ထိုနေရာတွင် သူ့စာကို တိကနဲ ပိပိယိယိ ဖြတ်ချလိုက်သည်၊ ကျွန်တော့်ရင်ထဲဟာကနဲ၊ သူပြောချင်သမျှကို အိပ်သွန်ဖာမှောက် ပြောချပြီးသွားပြီ၊ ဘာမျှမကျန်တော့၊ ကျွန်တော့်မှာသာ အမိုးဖွင့်လှောင်အိမ်ထဲမှ ရေခဲငှက်ကြီးများနှင့် လင်းတကြီးများအကြောင်း ဘက်ပေါင်းစုံ သံတိုင်သံတန်းတို့ ကာရံ ခံနေရသည့် နှင်းဖြူ ဇီးကွက်ကြီးများအကြောင်း တွေးမိနေသည်၊
Posted by ကိုဈာန် at 9:13 PM